Misaotra anao! Nopotehiko ny mpamaky fahana 700 sy ny marika 2,000 an'i Technorati! | Martech Zone
Misaotra anao! Nopotehiko ny mpamaky fahana 700 sy ny marika 2,000 an'i Technorati!
Alarobia, Jolay 11, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Leo aho tamin'ny herinandro lasa. Tiako ny mampiasa ny laharako Technorati ho toy ny torolàlana amin'ny fahombiazan'ny bilaogiko ary na hitohy na tsia. Nandritra ny herinandro maromaro dia nibolisatra teo akaikin'ny laharana 2,000 aho. Indray mandeha aza dia nilentika hatramin'ny 2,000 mahery… ary avy eo niverina aho ka tafakatra 2,038. Ugh. Nanomboka nitondra ahy voanjo aho. Hitako ny isa 2,000 na aiza na aiza.
2007 dia malaza ankehitriny.
Eo afovoany, ny bilaogiko dia nanao ny pejy fandraisana an'i Slashdot (ao amin'ny 100 voalohany ao amin'ny Technorati). Kivy aho… raha miresaka ahy sy i Slashdot mbola tsy afaka mamaky 2,000 tsy maintsy misy zavatra Haiko. Ary nisy!
Ny paikadiko hamakivakiana ny marika Technorati 2,000:
Ary ahoana ny amin'ny fandraisana ny vaovao fantatro momba ny famafana ny bilaogiko sy fanampiana ny hafa hampihatra izany amin'ny bilaogin'izy ireo? Indraindray mora ny mamaky ny torohevitra, fa ny fampiharana azy kosa mety ho henjana! Ka nanapa-kevitra ny handeha aho Blog-Tipping. Noheveriko ho lalao mahafinaritra amin'ny teny izany - fa rehefa miakatra ny rivotra, dia nampiasaina kely ilay teny. Manantena aho fa hametahana azy io. Nanolotra fanampiana olona tsotra fotsiny aho tamin'ny fanomezana torohevitra hanatsarana ny bilaogin'izy ireo raha nanonona ny ahy izy ireo.
Tsy misy vola, tsy misy fanomezana, tsy misy fifaninanana… fanampiana maimaimpoana fotsiny. Ry zazalahy, nahomby ve izany! Misaotra anao ry zalahy, nianjera tamin'ny laharana 2,000 aho ary manana momentum mba hitondrako azy lavitra kokoa. Paikady henjana io… mila mamaky, manadihady ary mikaroka ny bilaogy tsirairay aho ary manome torohevitra tsara. Miezaka ny tsy hamerina hamerina ireo toro-hevitra aho - tena manandrana mahita olana tsy manam-paharoa amin'ny bilaogy tsirairay nolazaiko.
Fanamby! Mianatra zavatra be dia be aho mandritra izany. Tombontsoa iray tsy nahy: ny mpamaky dia manondro ny lahatsoratro mba hahazoana ny toro-hevitra amin'ny bilaogy, ary avy eo dia manondro ny bilaogiko izy ireo aorian'ny fampiharana ny fanovana! Zavatra tsy nampoiziko akory izany fa tena nisy fiatraikany lehibe.
Angamba ny fanamby lehibe tsy maintsy niarahako taloha dia ny tendreo Lendo.org, bilaogy iray izay tsy amin'ny teny anglisy akory! Na dia nampiasa mpandika teny aza aho hijerena ny sasany amin'ny atiny - ny fandevonan-kanina ihany no lohahevitra tao amin'ny bilaogy (famakiana). Vantany vao vitako haingana ilay lahatsoratra André sy ny mpanoratra azy Daisy, haingana nampihatra fanovana mahavariana - ao anatin'izany ny sary lohan-doha mahafinaritra izay mahatonga anao hahatsapa ho ao an-trano sy vonona hamaky! Tsy andriko ny hihaino an'i André sy Daisy momba ny ataon'ny bilaogy herinandro vitsivitsy izao.
Ny valiny (hatramin'izao):
Nahatratra tanjona roa aho androany - mpamaky 700 ny FeedBurner ary ny laharana 2,000 amin'ny Technorati. Misaotra betsaka an'ireo mpamaky ahy, vaovao na antitra, tamin'ny nanampiany ahy hitondra ireo marika ireo!
Ny tanjoko vaovao:
Amin'ny faran'ny taona, te-hamaky ny sakana mpamaky 1,000 amin'ny sakafoko aho ary tena te-hitondra fiara mankany amin'ny Laharana Technorati 1,000. Ampahafantaro ahy raha mieritreritra ny hiala ianao. Mila anao miraikitra aho!
Fametahana bilaogy: bilaogin'ny bilaogera vahiny
Nanomboka nanoratra lahatsoratra aho…
11 Jul 2007 amin'ny 11:35 PM
Grats amin'ny fahombiazanao, Doug!
Jul 12, 2007 amin'ny 7: 15 AM
Tsy bilaogy raha tsy misy ny resaka, Slaptijack! Tena feno fankasitrahana aho noho ireo vondrona mpanohana mahatalanjona izay nandray anjara betsaka tamin'ity bilaogy ity. Heveriko fa ny fanehoan-kevitra no ilaina voalohany amin'ny fahombiazan'ny bilaogy. Samy ny hevitro amin'ny bilaogy hafa - ary ny ahy ao amin'ny ahy.
Tena misaotra anao rehetra aho. Tsy vitako izany raha tsy teo ianareo izay nikarakara fatratra nanampy ny resaka!
Jul 12, 2007 amin'ny 12: 07 AM
Miarahaba anao nahatratra ny tanjonao… afaka manome maimaika anao izy ireo rehefa hitranga izany ary izaho ho an'ny iray dia mbola eo ihany rehefa manatratra ny tanjonao manaraka ianao.
Jul 12, 2007 amin'ny 7: 17 AM
Misaotra Steven! Vakio ny hevitra voalohany nataoko - mihatra aminareo rehetra izany. Tena ataonao mora kokoa ity!
Jul 12, 2007 amin'ny 12: 47 AM
Tiako ilay endrika vaovao!
Mi-tweaking foana aho!
Jul 12, 2007 amin'ny 1: 26 AM
Tiavo ny tanjon'ny tanjonao. Tohizo fa ho tonga eo ianao.
Jul 12, 2007 amin'ny 7: 16 AM
Jul 12, 2007 amin'ny 6: 53 AM
Oay! Ity no loka lehibe azonao ho an'ny bilaogera fanampiana manerantany, toa ahy!
Aorian'io, manana mpamaky vaovao roa ianao, izaho sy i Daisy, fa hanoro anao izahay lehilahy betsaka! Ary ireo 'bandy be' ireo dia hanoro ny hafa 'bandy be'.
Tena arahabaina! Mendrika anao izany! 🙂
Jul 12, 2007 amin'ny 7: 18 AM
Misaotra betsaka tamin'ny fotoana nomenao ahy André! Azafady mba ampahafantaro anay ny fandehan'ny raharaha.
Jul 12, 2007 amin'ny 7: 21 AM
Mazava ho azy! Hifandray foana aho 😉
Jul 12, 2007 amin'ny 8: 31 AM
Jul 12, 2007 amin'ny 9: 26 AM
Misaotra Tony !!!
Jul 12, 2007 amin'ny 11: 29 AM
Arahabaina. Vao tsy ela akory izay dia nahatratra ny marika 500 ianao ary efa nanampy 200 hafa ianao. Mandeha tsara ianao izao. Fotoana kely sisa dia hitifitra mpamaky 1000 ianao.
15 Jul 2007 amin'ny 9:41 PM
Toa ny resaka momentum daholo no resahina, sa tsy izany? Efa ela aho no nitory an'izany - ary mahavariana ny fitomboany.
Manantena aho fa nanara-maso ny fitomboana hatramin'ny voalohany mba hahitako - saingy mieritreritra aho fa tena mitovy amin'ny Fibonacci… 1,2,3,5,8,13,21…
15 Jul 2007 amin'ny 6:43 PM
Arahabaina. Azoko antoka fa tsy handeha na aiza na aiza aho. Raha nataoko dia azonao atao foana ny mamerina ahy mandritra ny scan haingana miaraka amina lohateny lehibe.
15 Jul 2007 amin'ny 9:42 PM
Misaotra, Tinu! Tena tiako ny fanohanana rehetra. 🙂
Jan 9, 2009 ao amin'ny 10: 20 AM
Nanana bilaogy nandritra ny volana maromaro aho ary mbola anaty lozam-pifamoivoizana ary mbola tsy afaka manapaka toa ny nataonao ihany. Tena antenaiko fa ity tetikady ity dia hiasa tanteraka amin'ny technoratizako. Misaotra betsaka 🙂